Hlanganisa nethemba lokucoceka elomileyo? Inzuzo ephakamileyo?
Hlanganisa nethemba lokucoceka elomileyo? Inzuzo ephakamileyo? Imveliso yokucoca ngokucokisekileyo njengemarike yoshishino lonyango elikhulayo, ubuchule bemakethe bukhulu kakhulu, kwaye inzuzo eninzi yaba ngabantu emehlweni esizwe. Ngoko indlela yokuvula abacocekisi abomileyo banenzuzo? Ixabiso leemarike liza kuqhubeka lide liphi ixesha? Zonke ezi ziba yingxaki esifanele sicinge ngazo.
Icandelo leNkonzo ngexesha langoku njengoko abantu abahlala ngokuqhelekileyo bekhula ngokukodwa bavelise inkqubo epheleleyo, icandelo lokucoca elomileyo lisebe lenkqubo yesevisi, i-economics iphinda ihlalutye inkunkuma yokucoca i-franchise inzuzo, inzuzo ye-cleaner iphezulu ngokumalunga namanye amashishini, inzuzo kwiimitha ezise-70-80%, ngoko ke i-market prospecting is wide width.
Ukhuphiswano kuluntu, lukhokelela abantu ukusebenza, ngokukhawuleza ukukhawuleza iqondo lokuphila, ixesha liyimpumelelo, ixesha liyimali, ixesha ixesha lobomi ubomi bube sisisigqibo sabantu, kwaye banokukhawuleza ngokukhawuleza ukuhlamba iimpahla, iimeko zokuqala ukuhlamba kwemveli ayinamandla. Ngenxa yokuphucula rhoqo imilinganiselo yokuphila yabantu, abantu abaninzi abaqhelekileyo bafakwa kwisidingo sokuba bahlambululi bezakhono zokugcina iimpahla zeboya kunye neengubo zesikhumba, i-traditional manual yokugaya iilund yokugaya ayinakuzanelisa ukukhula kweenkonzo ezifunekayo.
Ngokuhlalutya inkunkuma yokucoca i-franchise inzuzo, abahlambululi abomileyo abazuzi ngeniso nje kuphela ephezulu kunye nezinzile, ezinqamlekileyo zokuhlambulula i-50% engama-80%, inxulumene namanye amashishini, enhle kakhulu. Ngokumalunga namanye amashishini oomatshini wokucoca i-franchise yintengiso ephezulu, i-shishini yokucoca elomileyo linokunyaniseka kwamakhasimende okwexesha elifanayo, inani lenkunkuma yokucoca i-franchise esenyukayo, ngokude nje ukuqonda enye indlela ishishini, unokufumana inzuzo ephakamileyo.
Inqaku lokugqibela: Isixhobo sokuhlamba esilungile...
Inqaku elilandelayo: Ziziphi iimfuno zokucoca ezico...